madaxdii somaliland soo martay & ma hadhooyinka lagu xasuusto . qaybtii 2aad | Burco Media
madaxdii somaliland soo martay & ma hadhooyinka lagu xasuusto . qaybtii 2aad
February 25, 2015 | Filed under: Articles-Maqaallo | Posted by: sayid cali
Soo maray dalkeeniyo
Kuwa maanta joogiyo
Raga maagan ee iman
Taariikh ma dhaafta ah
Ayaa daba maraysoo
Muujin doonta oo qori
Maamulkoodu kuu yahay
Midkii lagu mabsuudee
Hawl kar lagu majeertiyo
Kii cunaya maalkiyo
Taariikhdaa ka marag kici……………”
Xukuumadii c/raxmaan Axmed cali (tuur)
c/raxmaan tuur wax uu ahaa gudoomiyihii SNM ee ku guulaystay dib u xorayta dalkan jamhuuriyaddan somaliland .
sidoo kale c/raxmaan waxaa loo doortay madaxweynaha dalka muddo laba sanadood ah.
Xukuumadii uu madaxweynaha ka ahaa alle naxariistii jano haka waraabiyee c/raxmaan Axmed cali (tuur) ,waxay ahayd dawladii ugu horaysay ee somaliland yeelato.
c/raxmaan tuur iyo xukuumadiisa oo
ay ka hor yimaadeen caqabado badani waxa aynu xusi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee u qabsoomay, iyo caqabadihii soo waajahay dawladiisa mudadii koobnayd ee labada sano ahyd eee loo doortay madaxweynenimada dalka.Wax qabadkiisii
1. Ku dhawaaqitaankii gooni isu taaga jamhuuriyadda s/land:
Shirkii lagu qabtay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer 18kii May 1991kii , taas oo lagaga dhawaaqay in s/land ay gooni isu taagtay kana madax banaantahay somaliya , ayaa lagu doortay c/raxmaan tuur.
Waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee ku dhawaaqay in s/land noqotay jamhuuriyad madaxanaan.
2. Dhisitaanka qaab dawladeed:
Maadaama ay ahayd xukuumadiisu tii koowaad ee s/land gaar u yeelato waxa uu c/raxmaan soo dhisay xukuumada dhammaystiran oo leh wasiiradeedii iyo masuuliyiintii xukuumadda.
3. Samaynta ciidanka nabadgalyada:
Nabadu waa shayga ugu horeeya ee dawlad loo dhisto sidaa daraadeed ayaa uu madaxweyne tuur uu u sameeyey ciidan suga amniga dalka kaas oo lagu magacaabi jiray ciidanka nabad sugidda.
4. Qabashada shirkii Boorama:
Intii uu xilka hayey c/raxmaan waxa uu suurto galiyey in uu qabsoomo shirkii Borama lagu qabtay kaas oo lagu doortay madaxweyne cusub , isaga oo ka shaqeeyey sidii uu u qabsoomi lahaa shirkaas markii uu ka dhammaaday muddo xileedkiisii
5. Xil wareejin nabad galyo ah:
Madaxweyne c/raxmaan axmed cali waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee doorasho lagaga helo isla markaana si nabad galyo ah xilkii u wareejiya.
Shirkii Boorama c/raxmaan waxa uu xilka ku wareejiyey madaxweynihii cusbaa ee la doortay kaas oo ku soo baxay cod gacan taag ah alle ha u naxariistee Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal.
Waxa aynu ku tilmaami karnaa inay ahayd dimuqraadiyada inta badan caalamka laga raadinayo oo s/land ay ku talaabsatay iyada oo socod barad ah , isla markii dhidibada loo taagay.
Kuwaasi waa wax yaabihii u qabsoomay c/raxmaan tuur muda xileedkiisii , immikan aynu eegno waxyaabihii caqabadaha ku noqday xukuumaddiisa.
Inkastoo uu ku dadaalay in uu soo dhiso xukuumad hadana xukuumadaasi ma ay shaqayn sababo badan aawadood.
Waxaa waqtigaa dalka ka jiray jabhado qabiilaysan oo isbaarooyin dhigan jiray meelo badan kuwaas oo dadka u gaysan jiray dhac iyo tacadiyo kale.
Xukuumadii markaa jirtay way awoodi wayday in ay wax ka qabato daydaygaas awooda ciidan oo liidatay aawadeed.
Awood darada ciidankii xiligaasi waxay sababtay in xataa madaxtooyadii lasoo weeraro sida uu madaxweyne tuur ku sheegay khudbadii uu ka jeediyey shirkii Boorama.
2. Hub ka shigis la’aan :
Hubku waxa uu iska yaalay meelkasta cid walibana waxa ay haystay hubkeedii, taas oo dhibaato ku haysay amniga .
Ninkastaa waxaa uu adeegsanaayey hubkiisa iyada oo aan wax la xisaabtan ahi aanu jirin, cidii uu doonana ku weeraraayey.
Waxaa markii dalka lagu soo noqday soo if baxday qabyaalad aad u xoogaysatay taas oo sabab u noqotay in beel beel la isu dilo oo ay dhacaan dagaalo sokeeye.
4. Dagaal sokeeye:
Wakhtigii c/raxmaan tuur waxaa dhacay dagaalkii sokeeye ee ugu horeeyey .
Dagaalkii Berbera waxa uu dhex maray laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo wada dega deegaanka Berbera .
Xukuumadiisii waxa ay isku dayday in ay xaliso isla markaana soo afjarto dagaalkaa foosha xun, laakiin waa ay ku guulaysan wayday in ay dhamayso.
Guurtida oo tiir muhiim ah kaga jirta s/land ayaa iyana isku dayay , laakiin lama dhagaysan .
Ugu dambayn isla xilligii madaxweyne c/raxmaan ayaa si wada jira loo soo af jaray dagaalkii sokeeye ee Berera.
Intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa waqtigii c/raxmaan tuur.
Inaga oo u gudbi doona waayihii Maxamed xaaji ibraahin cigaal.
Wixii talo ah ku soo dir emailka ama mobileka.
La soco qaybta dambe……………..
Eng.C/raxmaan yuusuf c/laahi ( colhaye)
Email : colhaye777@hotmail.com
Tell : 0634140489